जूनकिरी | Nagarik News - Nepal Republic Media
मेरी सानी भदै छ, ऊ रमाइली हदै छ। पाक्कपुक्क गाला छ, कालोकालो छाला छ। हिजो पर्‍यो साइत, गएँ म नि माइत, तिमी गीत गाऊ भनी , नाचौँ दुवै आऊ भनी।
कृष्ण बाउसेका दुई बालकविता
ज्ञानी भई पढ्नेको झोलाभित्र पस्दछु अनपढलाई चिन्दिन बरु निदाई बस्दछु। थरीथरी अक्षर पानाभरि कुँद्दछु धेरै पाना मिलेर चाङ भई सुत्दछु।
मलाई मेरो सुगाले माया गरेको देखेरै मैंले हामीसँगै बस्छ भनेर । तर, मेरो भाग्यमा पनि सुगा रैन रैछ । किनभने मैंले ल्याएको सुगा एउटा मरयो । एउटा मरेपछि अर्काे ल्याउनुभयो बाबाममीले । तर, त्यो उड्यो । फेरि अर्काे ल्याएको, त्यो पनि उड्यो । उडे पनि मरे पनि मैले बुझे कि मैंले पालेका सबै सुगाले मलाई माया गर्थे।
नागरिक २७ वैशाख २०७८ सोमबार २ मिनेट पाठ
नेपालीकी छोरी म नेपाल मेरो देश धेरै पढीलेखी गर्नु छ देशको विकास नेपालका सन्तति सानासाना नानी नेपाललाई माया गर्ने बसालौँ है बानी ।
राष्ट्रिय एकता दिवसमा साइकल यात्रा
बन्धुमण्डल क्लबले बालबालिकालाई महत्व दिएर गरेको उक्त कार्यक्रमलाई गोर्कणेश्वर नपा वडा नंं ९र प्याङ्क वाइकले प्रायोजन गरेको थियो । यसमा काठमाडौं जिल्ला साइकल संघको प्राविधिक सहयोग रह्यो । यस्तो कार्यक्रमहरू देशैभरि हुन सके ज्यादै राम्रो हुने थियो किनकि आजका “बालबालिका भोलिका भविष्य”हुन । जय देश ! जय साइकल !
नागरिक २८ माघ २०७७ बुधबार ५ मिनेट पाठ
आफूभन्दा ठूला हरेक व्यक्तिलाई उत्तिकै आदर र सम्मान गर्ने काव्य साँच्चिकै उदाहरणीय बालिका छन् । हरेक बालबालिकाजस्तै खेल्ने र कुदनेसँगै छिट्टे साथी बनाइहाल्ने उनमा हाम्रो वरिपरि भएका घटनाक्रमलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने क्षमता छ । हामीले सोच्दै नसोचेका कुरा व्यक्त गर्ने क्षमता राख्ने काव्यको प्रतिभा आम बालबालिकामाभन्दा केही फरक छ । त्यसैले उनी सबैको नजरमा खास छिन् ।
नागरिक १७ माघ २०७७ शनिबार २ मिनेट पाठ
मलाई राजधानीको प्रख्यात स्कूलले निशुल्क पढाउने खबर रेडियोबाट सुने । यो मजस्ता अवसरविहीन विद्यार्थीका लागि गौरवको कुरा हो । धेरै उत्तम अवसरहरू जुट्लान् । तर, मलाई यो विद्यालय र यो शहरले जुन माया दिएको छ । यो माया सद्भभावलाई छोडेर म कतै पनि जान्न ।
नागरिक १५ माघ २०७७ बिहीबार ६ मिनेट पाठ
थैली हाँस्यो मुसुक्क
घिउदूध बेचेर पैसा जुटाई यसैमा, नयाँ लुगा किन्ने रे अब आउने दसैँमा ।पैसा राख्नै बिर्सेछन् झन्नै बाले भुसुक्क,जुँगा तानिन् आमाले थैली हाँस्यो मुसुक्क ।
पल्ला घरकी दिदीले बाटोमा फोहोर फाल्नुभो,अर्को घरको दादाले आएर प्लास्टिक बाल्नुभो।रुखाखोकी लागेर स्कुलमा जानै सकिनँ, कालो झिँगो बसेर भातमा खानै सकिनँ।
जिउ र जाडो
आच्छुआच्छु जाडो भो हिमालको हिउँले थुर्थुर– थुर्थुर कमायो खपेन खै जिउले । तातो– तातो भातमा झ्वार्रर पार्दा घिउले बल आई आँतमाजाडो खप्ला जिउले ।
मयुरझैं घुम्दैघुम्दै नाची पनि दिऊँला
सानी नानी सरिनाको गीत गाउने मन्छ , गीतसँग म नाचूँला उन्को भाइ भन्छ । राम्रो स्वरमा राम्रा गीत गाउनु नै पर्छ, यसो गर्दा आफैलाई रमाइलो हुन्छ।
नागरिक ३ माघ २०७७ शनिबार १ मिनेट पाठ
साना केटाकेटीहरू उनीहरूका बाबाका ढाडमा चढ्थे । बाबाचाहिँ घोडा बनेर हिँड्थे । कहिले आफ्ना बच्चालाई काँधमा राखेर बाबा घोडा दौडिएझैं दौडन्थे । त्यो दृश्य देख्दा अनुराग टोलाएर हेर्दथ्यो ।
नागरिक १ माघ २०७७ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
भाका देऊ सीप देऊ मौका पनि देऊ
राम्रो स्वरमा राम्रा गीत गाउनु नै पर्छ, यसो गर्दा आफैलाई रमाइलो हुन्छ। बाबा देऊ राम्रा गीत गुरुआमा देऊ भाका देऊ सीप देऊ मौका पनि देऊ हामी साना नानी मिली गीत गाइदियूँला, मयूरझैं घुम्दैघुम्दै नाची पनि दिऊँला ।
म के बनूँ !
म के बनू भन्ने प्रश्न दिमागमा खेल्यो, अनेकन पीडाहरू यसले नै झेल्यो । लौ न बाबा लौ न आमा सुझाउनू जुक्ति, अन्योलको जालोबाट दिलाउन मुक्ति ।